You are hereအဖွင့်စာမျက်နှာ နောက်ဆုံးရသတင်းများ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် သြစတြေးလျ ဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအား လက်ခံတွေ့ဆုံ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် သြစတြေးလျ ဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဆီနိတ်တာ Hon. John Joseph Hogg ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အရှေ့တီမောဝန်ကြီးချုပ်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ESCAP အမှူဆောင်အတွင်းရေးမှူးတို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပသည့် (၆၉) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ပြီး အရှေ့တီမော ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Hanana Gusmao၊ ကုလမသဂ္ဂ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Jan Eliasson နှင့် ESCAP အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Dr. Noeleen Heyzer တို့အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းနှင့် မွန်းလွဲပိုင်းတို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ESCAP အဆောက်အအုံ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (၆၉) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေးကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့၌ကျင်းပမည့် (၆၉)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေးကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန် အဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလျက် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်း အထူး လေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ရာ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အမှာစကားပြောကြား ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပုံ ရုပ်မြင်သံကြားမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧပြီ ၃၀ ရက် ညနေ ၅ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန (MICC) ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ အဆိုပါ အခမ်းအနား ကျင်းပပုံများကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာပါ အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
ဆက်ဖတ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တောင်အာဖရိက သမ္မတထံ ဝမ်းမြောက်သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် ကျရောက်သော တောင်အာဖရိက သမ္မတနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံမှ တောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ဂျေးကော့ဘ် ကဲလေယိ လှဲကိဆာ ဇူးမားထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် Asia Group ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dr. Kurt Campbell ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းသည် ယနေ့ နံနက် (၁၁) နာရီတွင် အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် Asia Group ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dr. Kurt Campbell ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ ဆက်ဖတ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်(၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး သီးသန့် အစည်းအဝေး တက်ရောက် ဆွေးနွေး (၂၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး သီးသန့်အစည်းအဝေးသို့ ဧပြီ ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်မြို့ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက် ဆွေးနွေးသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် ချီးမြှင့်ထိုက်သည့်သူကို ထိုက်တန်စွာ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းတော့မည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆုများ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကြီးကို လာမည့် ဧပြီ ၃ဝ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆုနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် လက်မှတ်များကို မည်သူက မည်သို့ ဆွတ်ခူးရရှိမည်ဆိုသည်ကို စိတ်ဝင်တစား ရှုစားအားပေးကြပါရန် တိုက်တွန်း လိုက်ရပေသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် Pages« first